Mania( म्यानिया ) कस्तो रोग हो त ? डा प्रभाकर पोख्रेल - स्वास्थ्य संसार Mania( म्यानिया ) कस्तो रोग हो त ? डा प्रभाकर पोख्रेल - स्वास्थ्य संसार
Home > Prabhakar > Mania( म्यानिया ) कस्तो रोग हो त ? डा प्रभाकर पोख्रेल
Mania( म्यानिया ) कस्तो रोग हो त ? डा प्रभाकर पोख्रेल
राम आजकाल बिहानै उठ्छ , ३ पनि नबज्दै उठ्छ। उ यति छिटो उठ्ने मान्छे होइन। यति छिटो उठ्दा पनि उसलाई थकाई भने लाग्दैन थियो बरु उ अझै खुशी देखिन्थ्यो। आजकाल उ अझै धेरै गीत गाउने , नाच्ने भएको थियो अनि त्यसो नगर्नु भनेर सम्झाउदा झनै रिसाउथ्यो। अरु बेला खासै नबोल्ने मान्छे आजकाल नचिनेको मान्छे सित पनि बोल्थ्यो। उसका कुरा पनि ठुला ठुला हुन्थ्यो जस्तै करौडो को व्यापार गर्ने , विदेश मा शाखा खोल्ने र कहिले त आफुलाई भगवान को अवतार झैँ कुरा गर्छ।
४ दिन भैसकेको थियो उ आफ्नो २० बर्से जागिर नगएको अनि हालसालै अफ़िस मा पनि जो सित पनि झगडा हुन्थ्यो रे। हाकिम को कोठा मा गएर तपाई लाइ काम गर्न आउदैन भन्थ्यो रे। पैसा त उसले खोला जस्तै बगायो। साथी हरु लाई दिनका दिन पार्टी दिन्थ्यो। ऋण लिएर मस्ती गर्ने, जे देख्यो त्यहि किन्ने, नसा सेवन गर्ने, तेज गाडी कुदाउने , केटी दिस्क्याउने , नयाँ महँगो लुगा लगाउने, नया गग लगाउने गर्न थाल्यो जुन राम को कहिले पनि स्वभाव थिएन। परिवार का सबै जना राम मा आएको यो परिवर्तन देखेर अचमित छन्।
भुत प्रेत लग्यो भनेर बोका बलि लिएर लग्यो झारफुक गर्ने ले तर समस्या झनै बिग्रियो। २ दिन अगाडी पुलिस लाइ पिटेछ अनि मन्त्रि लाई भनेर सरुवा गरिदिन्छु भनेर गाली गरेछ। त्यस पछि पुलिस ले थुन्यो अनि परिवार ले रोग हो कि भन्दा थाहा पाए छन् यो म्यानिया भन्ने रोग हो भनेर। तर राम ले आफु ठिक भएको भनेर जिद्दी गर्छ। बल्ल बल्ल मनो चिकित्शक (Psychiatrist) लाइ देखाएर उपचार गरेपछि ठिक हुदै छ।
१. के हो म्यनिया भनेको ?
यो एक प्रकार को मानसिक/मनोरोग हो।
२. यसको लक्षण के हुन्छ?
यसका लक्षणहरु मा सामान्य स्वभाव भन्दा बिपरित:
निन्द्रा को आवशेकता कम हुने,
शरीर मा धेरै तागत वा फुर्ति हुने,
धेरै खुशी हुने या धेरै रिसाउने ,
धेरै बोल्ने , झगडा गर्ने , ठुला ठुला कुरा गर्ने
आफुलाई ठुलो मान्छे भन्ठाने , धेरै पैसा खर्च गर्ने
नचाहिने लगानी गर्ने , फाल्तु को खर्च गर्ने ,
अरु लाई मान्छे नगन्ने , कहिले धेरै पूजा पाठ गर्ने, कहिले आफुलाई भगवान को अवतार सम्म भन्ने ,
एक ठाउमा स्थिर भएर नबस्ने, मन मा एक पछि अर्को कुरा खेल्ने ,
नसा सेवन गर्ने वा पहिला भन्दा धेरै गर्ने ,
योन इच्छा बढ्ने आदि हुन्छ।
(तर बिरामी लाई आफु ठिक छु भन्ने भान हुन्छ , उनीहरु ले (धेरै ले )आफ्नो स्वभाव मा आएको परिवर्तन चिन्न सक्दैनन्)
३. माथि का सबै लक्षण हुने पर्छ
होइन, कम वा धेरै वा अलि फरक पनि हुन सक्ने हुनाले मनोचिकित्सक(psychiatrist /Neuropsychiatrist ) लाई देखाउन जरुरी हुन्छ।
४. के यो भूत प्रेत ले गर्दा हुने हो , किन भने यस्तो स्वभाव त उहा को थिएन ?
होइन, यो दिमाग को रसायन को गड बडी ले हुन्छ, अनि तनाव ले बल्झिन सक्छ , पारिवारिक वा बंग्शानुगत पनि हुन सक्छ , धेरै जसो मा मौसम बद्लिदा पनि बल्झिन सक्छ।
हैन तर रोग लागेर मान्छे आफुलाई भगवान झैँ कसरी मान्छ , त्यो पनि पूर्ण विश्वास को साथ् ?
जसरि कति ले शिव रात्रि मा भाङ्ग खादा आफुलाई उडेको , रंग हरु नाचेको देख्छन किन कि त्यस बेला नशा ले दिमागीरसायन को गडबडी गर्छ त्यसै गरी जब दिमागी रसायन को गडबडी हुन्छ यस्तो रोग लाग्छ। अनि थुप्रै हुन नसक्ने कुरा हुन थाल्छ। अनि यो महिला पुरुष दुवै लाई हुन सक्छ।
५. यो रोग लागेपछि ठिक हुदैन हो ?
होइन, औषधी उपचार ले यो रोग ठीक हुन्छ , बिरामी पुरानो स्वभाव मा फर्किन्छन तर फेरी बल्झिन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
६ के जीवन भर औषधि खाई रहनु पर्छ ?
त्यस्तो होइन। कसै कसै लाई जसको धेरै चोटी बल्झिन्छ उनीहरु को लागि चाहि लामो समय सम्म खाने हुन सक्छ।
७ यस्ता बिरामी ले आफ्ना नियमित काम गर्न सक्दैनन् रे हो ?
होइन, ठिक भएपछि धेरै जना आफ्नो नियमीत काममा फर्किन्छ र यसको थुप्रै उदहारण रहेको छन्।
८. यस्तो बिरामी लाइ अरु के रोग लाग्न सक्छ ?
यस्तो म्यानिया भएको बिरामी हरुलाई कुनै बेला डिप्रेसन हुन सक्छ (डिप्रेसन को लागिdepression ) अनि दुवै प्रकार को हुने भयो भने बाइपोलार (Bipolar disorder को लागीbipolar ) भनिन्छ। यसको लागि अलि फरक उपचार छन्।
यस रोग को बारेमा अन्य जानकारी हामी फेरी पनि लिएर आउने छौ।
Item Reviewed: Mania( म्यानिया ) कस्तो रोग हो त ? डा प्रभाकर पोख्रेल Rating:5Reviewed By: Prabhakar